एमालेले २७ सांसदलाई काँटी गर्ने, को को परे ओलीको निशानामा ? - Baikalpikkhabar
एमालेले २७ सांसदलाई काँटी गर्ने, को को परे ओलीको निशानामा ?
७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले २७ प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) लाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । पार्टी हित विपरित गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सांसदहरुलाई सोध्न लागिएको स्पष्टीकरणमा दुई दिनभित्र जवाफ दिन आग्रह गरिनेछ ।
चित्तबुझ्दो जवाफ नआए निस्कासन गर्नसक्ने नेताहरु बताउँछन् ।
स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिएका नेताहरुको सूची हेर्नुहोस्
१७) दीपकप्रकाश भट्ट
मङ्गलबार, ०७ बैशाख, २०७८, दिउँसोको ०१:१८ बजे